असोज २ देखि मलमास शुरु । मलमासमा के गर्ने,के नगर्ने ? असोज २ देखि मलमास शुरु । मलमासमा के गर्ने,के नगर्ने ?
असोज ०१, २०७७ मुस्कान खनाल
नेपाली समाजमा अहिले दुई खाले मान्यता ब्याप्त छ; पहिलो, धर्मको नाममा हुने हर कुरा सहि हो भनेर अन्धाधुन्ध त्यसको पछि लाग्ने। दोस्रो, धार्मिक कुराहरु सबै अन्धविश्वास र रुढिबादी हुन् भनेर बेवास्ता गर्ने वा निन्दा गर्ने। कुनै बिषयको निष्कर्षमा पुगिहाल्नु अघि त्यसबारे खोज्नु, पढ्नु, बुझ्नु वा जानिफकारहरुसंग सोध्नु महत्वपुर्ण हुन्छ। हाम्रो सनातन धर्मले सिकाएका सबै कुरा अन्धविश्वास हुन्नन्। धर्मले मानिसलाई नियम र अनुशाशनमा बाँध्ने काम गर्छ। धर्मले सुविचार, प्रेम, सदभाव र सकारात्मक सोच विकास गर्नु पर्छ न कि अनावश्यक भय र त्रास फैलाउने काम। हाम्रो हिन्दु धर्मग्रन्थहरुले हामीलाई सधै असल ज्ञान र पाठ सिकाइरहेका हुन्छन । समस्या के मात्र हो भने आधिकारिक धारणा, ज्ञान के हो नबुझी मनगढ़ंत तरिकाले धर्मको ब्याख्या गर्नाले धेरै भ्रम सिर्जना भएका छन् र गलत परम्पराहरु स्थापित हुँदै गएका छन्। यसै सन्दर्भमा यस वर्ष असोज २ गते बाट पुरुषोत्तम मास सुरु हुँदैछ त्यसैले होला मलाई दैनिक बग्रेल्ती फोन / म्यासेज आउँछन अनि सबैको जिज्ञासा उहिनै हुन्छ,
यसपालीको मलमास कडा छ भन्छन , श्रीमान श्रीमतीले एक अर्काको मुख समेत हेर्न हुन्न रे हो गुरु ?
बरबाद भयो हजुर युट्युब मा हेरेको मलमासमा बच्चा जन्माउनु अशुभ हुन्छ रे , मेरो श्रीमतीको डेलिभरी यहि महिना मा हुदैँछ , कतै केहि अनिष्ट त हुने होइन गुरु ?
यावत प्रश्नहरुले गर्दा लाग्छ हाम्रो समाज लाई अझै पनि अन्धविश्वासले जकडिराखेको छ ।अधिकमास अन्धविश्वास हैन तर ’यसपालीको मलमास कडा छ, श्रीमान श्रीमतीले एक अर्काको मुख समेत हेर्न हुन्न’ भन्नु चाही अन्धविश्वास हो ।
किनकि वैदिक धर्म’ले यो समयमा नवविवाहित दम्पति एकै घरमा संगै बस्न हुँदैन भनेर भनेको छैन ।
बिवाह र गृहस्थी मानब जीवनका अभिन्न अंग हुन्। जसरि हामी सामान्य रुपमा खाना खान्छौं, कार्यालय जान्छौं, त्यसै गरि बैबाहिक जीवन सुचारु गर्न सक्छौ। यो समयमा बिवाह गर्नु हुँदैन, तर अधिकमास पुर्व बिवाह गरेकाहरु संगै बस्न सक्छन्। खाली यत्ति हो कि यो मासमा गर्भ धारण गर्नु सुखप्रद हुँदैन। जन्मने शिशु तथा आमाको लागि कष्टपूर्ण हुनसक्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रही आएकोछ।
पहिलेको समाजमा घरकी बुहारीलाई बर्षभरि कामकाजमा खटाएर चाडबाड वा यस्तै बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्रै माइती जान छुट दिने सामाजिक मानसिकताले यस्ता कुराहरुको पृष्ठपोषण गरेको हुन सक्ला शायद । तर अहिले समय धेरै परिवर्तन भैसक्यो, त्यसैले कतिपय मान्यताहरुलाई समय सापेक्ष ढंगले परिमार्जन गर्दै जान जरुरी छ ।
मलमासकै सन्दर्भमा, यथार्थमा ‘मलमास’ पुरुषोत्तममास हो, ‘कालो समय होईन’ आउनुस् यसका सकारात्मक पक्षलाई हेरौं ।
यस वर्ष असोज २ गते शुक्रबारदेखि अधिकमास अर्थात मलमास सुरु हुँदैछ । असोज २ गतेदेखि असोज ३० गतेसम्मको अवधिलाई मलमास वा पुरुषोत्तम महिना पनि भनिन्छ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार ३ वर्षको अन्तरालमा एक चान्द्र महिना बढी हुने हुनाले यसलाई अधिकमास भनिन्छ । अर्को यो महिनालाई पुरुषोत्तम नारायणले जिम्मा लिएकाले यसलाई पुरुषोत्तम मास पनि भनिन्छ ।
एक चान्द्र महिनामा शुक्ल र कृष्ण गरी दुई पक्षहरू हुन्छन् । त्यसैले तिथिका आधारमा विचार गर्दा एक वर्षमा सामान्यतया १२ चान्द्र महिना र चौबीस पक्षहरू हुन्छन् । अधिकमास परेको वर्षमा तिथिका हिसाबले हुने चान्द्र महिनाको संख्या १३ हुन्छ भने पक्षको संख्या पनि २६ हुन्छ ।
अधिक मासमा के गर्नु हुन्छ ? के गर्नु हुदैन ?
२)दैनिक नित्य कर्म, सधै गरेर ल्याइएका कर्म जस्तो दैनिक विहान बेलुकाको पूजा ।
३ ) पुरुषोत्तम पूजा कथा श्रवण
गर्न नहुने कार्य
१ ) श्राद्ध तथा पितृकर्म
२ )विवाह व्रतवन्ध, चूडाकर्म
३ ) सप्ताह, नवाह, महारुद्रि, शतचण्डी
४ ) शुभ मूर्हुतका कुनै पनि कर्म गर्नु हुदैन जस्तो गृह प्रवेश , नयाँ कार्यको थालनी , यात्रा, कार्यको शुभारम्भ गर्न अशुभ मानिन्छ ।
५ )अधिक मासमा विवाह गरेमा गृह सुख हुदैन
६ ) गर्भाधान गर्नु हुँदैन, पहिले नै गर्भ रहेको भए दोष लाग्दैन। नवविवाहित श्रीमान् श्रीमतीले मलमासलाई छल्नु पर्छ भन्ने परम्परा पनि गर्भाधान गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामै आधारित रहेको हो ।
७) बृहस्पति र शुक्र अस्त भएका बेला गर्न नहुने जति कर्म मलमासमा पनि गर्नुहुँदैन।
प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण, महिना आदिका स्वामी छन् तर अधिक मास अर्थात् मल मासको स्वामी छैनन् । यसकारण अधिक मासमा सम्पूर्ण शुभ कार्य, देव कार्य एवं पितृ कार्य वर्जित मानिएको छ । यद्यपि, पुराणमा अधिक मास पुरुषोत्तम मास कसरी बन्न पुग्यो भन्ने रोचक कथा दिइएको छ ।
कथाअनुसार स्वामी अर्थात् मालिक नभएका कारण अधिक मासलाई सबैले मल मास भन्न थाले । यसबाट मल मासको निन्दा हुन थाल्यो । यो कुराबाट दुःखी भएको मल मास भगवान् विष्णुकहाँ पुग्यो र आफ्नाे दुःख बिसायो ।
भक्तवत्सल श्रीविष्णुले उसलाई गोलोक लिएर गए । गोलोकमा भगवान् कृष्ण विराजमान थिए । दयासागर श्रीकृष्णले मलमासको व्यथा बुझेर उसलाई सान्त्वना दिँदै भने– ‘अबदेखि म तिम्रो स्वामी भएँ । यसबाट मेरा सबै दिव्य गुण तिमीमा समाविष्ट हुनेछन् । म ब्रह्माण्डमा पुरुषेत्तमका नामले प्रसिद्ध छु तसर्थ आजदेखि तिम्रो नाम पनि पुरुषोत्तम हुनेछ । आजदेखि तिमी मल मास नभएर पुरुषोत्तम मासका नामले चिनिनेछौ । यसका साथै तीन तीन वर्षमा हुने तिम्रो आगमनमा जसले श्रद्धाभक्तिपूर्वक राम्रा काम गर्छन् ती व्यक्तिलाई अन्य समयमा गरेको उति नै अनुपातको कर्मबाट भन्दा बढी पुण्य प्राप्त हुनेछ ।’
यसरी भगवानले अधिक वा मल मासलाई पुरुषोत्तम मास बनाएर धर्मकर्मका लागि उपयोगी बनाइदिए । यो दुर्लभ महिनामा जसले स्नान, पूजाआराधना, यज्ञअनुष्ठान एवं दानधर्म गर्छ उसले अत्यधिक पुण्य प्राप्त गर्दछ ।
यसकारण हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा अधिक मासलाई निकै पवित्र मानिएको छ । भगवान् कृष्ण अर्थात् विष्णुको महिना भएकाले यो महिनामा गरिने व्रत पारायण, पवित्र नदीस्नान एवं तीर्थयात्राबाट साह्रै ठूलो पुण्य प्राप्त हुने कुरा शास्त्रहरूमा बताइएको छ ।
त्यसैले पुरुषोत्तममास ’मलमास हो, कालो समय हो’ भनेर प्रचार नगरौ, यसका सकारात्मक पक्षलाई हेरौं, आफ्नो मन, बचन, कर्म शुद्द गरौँ, दान गरौँ, सहयोग गरौँ । कोभिड १९ को कारण भएको लकडाउनले धेरै नेपालीहरु पिडित छन् ,यो पुरुषोत्तममासमा उनीहरुलाई केहि दान/सहयोग गरि पुण्य कमाउने हो कि ?
लेखक युवा ज्योतिषी तथा वास्तुशास्त्री मुस्कान खनाल दक्षिण एशियाली ज्योतिष महासंघका केन्द्रिय सदस्य हुन् । सम्पर्क – ग्लोबल एस्ट्रलोजी घोराही दाङ माेवाइल ९८५११९३९६४, ९८२२८५०७३५
लेखकको वारेमा थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
“सपना यस्तो छ”
आज धनतेरस,कुन राशिले के किन्ने ?